अग्रगामी प्रतीक: इतिहास र अर्थ
अब अग्रगामी प्रतीक इतिहास भएका छन्, तर पुरानो पुस्ता विषयमा आफूलाई साथ दुवै परिचित छ, र यसको इतिहास र परम्परा छ। समय प्रतिमा परिष्कृत र परिमार्जित। यो एक भयानक र कुनै किसिमको बहाना छैन कुरा विचार थियो गुमाउन।
पहिलो अग्रगामी प्रतीक को रूप
पहिलो अग्रगामी प्रतीक 1923 मा देखिन्छन्। तिनीहरूलाई लेखिएको थियो मा, "तयार हुनुहोस्!"। यसलाई यो अग्रगामी संग सुसज्जित थिए भएको सोभियत संघ को प्रतीक त्यतिबेला। लौ पाठ्यक्रम, अपरिवर्तित आदर्श वाक्य पायनियर्स को मूल फारम, आगो, हथौडा, Sickle प्रदर्शित र, थियो। तथापि, यस्तो चरित्र उहाँले वर्ष पाँच मात्र लामो र त्यसपछि यसलाई बदल गर्न थाले।
अर्को कदम अग्रगामी प्रतीक टाई अडिएको थिए क्लिप को फारम, मा उत्पादन गर्न थाले थियो। परिवर्तन भएको छ र आदर्श वाक्य। अब उहाँले जस्तै सुनिन्थ्यो "सधैँ तयार!"। जस्तै, प्रतिमा आफ्नो उत्पादन रोकिएको थियो जब, द्वितीय विश्व युद्ध को शुरुवात सम्म बाँचे। अग्रगामी आफूलाई उपलब्ध स्क्रैप सामाग्री देखि एक अक्षर उत्पादन।
युद्धपछिको परिवर्तन अग्रगामी ब्याज
युद्ध अन्त गरेर फेरि उत्पादन अग्रगामीहरूसित विशेषताहरु फेरि सुरु गरियो। अग्रगामी नयाँ प्रतिमा परिवर्तन गरिएका छन्। केन्द्र मा स्थान आगो हथौडा र Sickle र ज्वाला तीन-तारे zaaleli जिब्रो लियो। पनि अब प्रतीक तीन स्तर मा उमेर समूह अनुसार विभाजित छन्।
1962 मा प्रभावित प्रतीक को अन्तिम परिमार्जन। यसलाई मनन गर्न सकेन नेता प्रोफाइल VI को पायनियर्स साइन को केन्द्रीय भाग यो अवधि लेनिन, यो मुनि त्यहाँ नारा "तयार सधैँ!" छ तारा को शीर्ष आगो तीन भाषामा उडायो लगातार मा। प्रयोगकर्ता प्रतिक्रिया अनुसार, यो पछिल्लो डिजाइन मानिसहरूलाई भन्दा अपील आए।
को चिरपरिचित फारममा साथै, अग्रगामी प्रतीक पनि प्रिमियम थिए। अग्रगामी आदर्श वाक्य सट्टा शब्दहरू sported कि साधारण तिनीहरूलाई प्रतिष्ठित "सक्रिय कामको लागि।"
अग्रगामी संगठनको अस्तित्व को पूरा अघि अग्रगामी प्रतिमा
पुरानो अग्रगामी लागि - मध्य-80s द्वारा त्यहाँ अर्को प्रकारको अग्रगामी प्रतीक थियो। सरल देखि तिनीहरूले ठूलो आकार कि बाहेक फरक। धेरै असुरक्षित: तर, यो संग पनि यो विशेषता मा एक महत्वपूर्ण दोष थियो। पिन र त्यसपछि तल भङ्ग, र तल भङ्ग, र विस्थापन वा नयाँ प्रतिमा सम्भव छैन किन्न। फलस्वरूप, यी "सामान" हर एक ठाँउ गर्न बर्बाद छैन र चाँडै अवस्थित भएनन्।
आइकनका रूपमा अग्रगामी सम्बन्धहरु, छैन व्यावहारिक र दैनिक प्रयोगको लागि असुविधाजनक थिए। आफ्नो डिजाइन त्यहाँ महत्वपूर्ण कमीकमजोरी थिए। विद्यार्थी बीच अग्रगामी प्रतीक को विश्वसनीयता एकदम कम छ त्यसैले, कुनै एक थियो यो मुद्दा सम्बोधन गर्न।
को अग्रगामी प्रतीक को ऐतिहासिक महत्त्व
मिति, अग्रगामी प्रतिमा को इतिहास फिर्ता लगभग एक शताब्दी तिथिहरु। अब कसैले पनि यो विशेषता प्रयोग गर्दछ, तर विद्यार्थी जीवन बिना एक समयमा वास्तविक चुनौती बन्नेछ। एक बच्चा पायनियर्स मा स्वीकार गरिएको छैन, र अग्रगामी विशेषताहरु भइरहेको छैन, लगभग कमसल छलफल भएको थियो। यो कुरा गर्न चाहेनन् भएकोले उहाँ सधैं अन्तिम बारी मा यो सबै पायो, र गिल्ला र खिसी सुने थिए सबै समय साथीहरूको। हामी अग्रगामी ब्याज गुमाए भने, यो सबैभन्दा ठूलो लाज छलफल भएको थियो।
पनि लोकतन्त्र को स्कोप बाहिर अग्रगामी प्रतिमा संग सम्बन्धित परम्परा गरौं, र सम्पूर्ण सत्य होइन, र कहिले काँही, तर तिनीहरूले जवान पुस्ता अनुशासन र आफ्नो प्रतीकात्मक रूप, आफ्नो देशको लागि गहिरो आदर ल्याए। यो सबैलाई गर्व र सम्मान साथ लगाउन प्रयास जो अग्रगामी, को मानार्थ शीर्षक थियो, र कुनै पनि मामला मा धब्बा छैन र बदनाम, बस एक विशिष्ट प्रतिमा विद्यार्थी थियो।
Bagration flushes के हो
युग - मानव विकास अवधि। संसारको उमेर के के हुन्?
पृथ्वीमा खसे कि सबै भन्दा ठूलो meteorite के हो?
1944 मा ओडेसा मुक्ति। अप्रिल 10 - ओडेसा को मुक्ति को दिन
आन्तरिक को 90 को दशक मा उत्तर काकेशस रूस को नीति (छोटकरीमा)
वित्तीय मूल्यांकन: रूस र सबै भन्दा राम्रो बैंकहरू संगठन, प्राप्त लोकप्रियता
आफ्नो प्रभावकारिता को एक सूचक रूपमा रय सूचकांक
आफ्नो हातले कागज को "अनन्त ज्वाला" कसरी गर्न?
फ्रान्सेली पाइ स्याउ संग "Tarte Tatin": नुस्खा
लोकप्रिय नाइटक्लब (Lazarevskoye)
कसरी Tele2 को लागि अर्को टैरिफ मा स्विच गर्न सक्छु?
Mett Stoun - अमेरिकी एनिमेटर, निर्देशक, अभिनेता, Screenwriter र निर्माता
उत्तर संग फल बारेमा पहेलियों: दुवै आनन्द र मन लागि उपयोगी!